Top 10 Easy Atụmatụ N'ihi Train ịnya Smart N'ebe nile | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Top 10 Easy Atụmatụ N'ihi Train ịnya Smart N'ebe nile
Ejegharị ụgbọ okporo ígwè pụrụ ịbụ otu n'ime ndị kasị izuike na-atọ ụtọ ụzọ na-gburugburu. Mkpa ka ị mara otú ka ihe kasị mma nke njem gị na-smart. N'ịbụ nke ọma haziri ahazi na ịma ihe bụ ihe na-aga ogologo ụzọ n'akuku-eme gị ụgbọ okporo ígwè na njem a mata nke gị ezumike ma ọ bụ njem. Were a lee anya na ndị a Top 10 Easy Atụmatụ maka Train ịnya Smart. A kwadebere maka gị ọzọ njem.
Top 10 Easy Atụmatụ maka Train ịnya Smart – NDỤMỌDỤ ONE: Zụrụ Your Ticket Na tupu
Top 1 nke Top 10 Easy Atụmatụ maka Train ịnya Smart, Jide n'aka na-eme atụmatụ gị na njem na ịzụta ụgbọ oloko gị tiketi n'ọdịnihu iji jide n'aka na ị ga-esi na ụgbọ oloko na ị chọrọ. Jide n'aka na-ajụ banyere ihe ọ bụla ọpụrụiche ma ọ bụ ego ahụ nwere ike ịbụ dị gị. Onye na-adịghị n'anya na-azọpụta ụfọdụ ego! Ị ga-enwe ike azọpụta a bit nke ego na-emefu na n'akụkụ ndị ọzọ nke gị na njem.
A nwaanyị a Train Station
NDỤMỌDỤ abụọ: Stow Your akpa
The kacha mma Easy Atụmatụ maka Train bụ na unu adịghị mkpa mgbe nile na-elele gị akpa na na ọ bụrụ na ha bụ ndị a ihe ezi uche size ị nwekwara ike ịhọrọ chekwaa ha na ogbe n'elu oche ma ọ bụ nkpirikpi ha n'ime zita ohere n'etiti azụ na-azụ oche. Nke a ụzọ na ị nwere gị na akpa gị nso mgbe niile.
NDỤMỌDỤ ATỌ: Nwee Smart With Your akpa
Anyị na-adịghị na-ekwu na ọ bụla ụgbọ okporo ígwè nwere a ohi njikere ịnwụde na mbu ohere ha ga-esi, kama na-na mma n'akụkụ. Ịmụrụ anya mgbe ọ na-abịa gị na akpa. Chekwaa ha nghọta kama na njedebe nke a n'ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụrụ na ị nwere a azu paaki ị nwekwara ike clip gị straps na ebu ibu n'ịnyịnya na-extra mma.
NDỤMỌDỤ anọ: Chọta gị Seat
Ọ bụrụ na ị na-eji anyị gara aga Easy Atụmatụ maka Train njem na nwere debeere a oche na ị na-niile ota. I nwere ike na-aga ogologo gị ebe. Ọ bụrụ na bụghị, ị na-nnọọ ka na-ekwu na ọ bụla tụkwasịrị nnọọ oche. Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ndị a dị, ịlele ndoputa tags debekwara n'elu oche ndị ma ọ bụ ndị ogige ụzọ. The tags egosi gbatia nke njem na oche na-gbaa akwụkwọ maka. Ha na-egosi ma ọ bụrụ na ị na-na-na-anya tupu nwe ọbụna na-akawanye na ị na-free na-na oche.
NDỤMỌDỤ ise: Jiri Train Oge Jiri amamihe
Were ohere iji oge nọrọ na ụgbọ okporo ígwè na-eme njem na-onwe gị haziri. I nwere ike na-eme atụmatụ maka gị ọzọ ebe. Jiri a na-agụ gị akwụkwọ ntuziaka, elele ntụziaka iji na gị ọzọ ebe. Gaa site na gị photos, hazie gị azu paaki, abụọ-elele njikọ gị ma ọ bụ mezue ọ bụla ọzọ ihe aga-eme na ị chọrọ mgbe ị nwere oge. Ọ bụrụ na gị na njem bụ ogologo nke a bụkwa a mma ohere iji aka ụfọdụ nke nlegharị anya.
Ọdụ ụgbọ elu nke Lyon ruo Nice site na Ọzụzụ
NDỤMỌDỤ isii: Jiri The Ime ụlọ ịwụ On The Train
Iji zọpụta ma na oge na ego na-agbalị na-eji nke a Easy Atụmatụ maka Train na-eji ime ụlọ ịwụ na ụgbọ okporo ígwè dị ka megide iji ndị na ọdụ. The ụgbọ okporo ígwè ụlọ mposi na-na-emi odude ke utịt ụgbọala na ha na-abụkarị ihe ọcha karịa ndị ụlọ mposi na ụgbọ, dị ka nke ọma dị ka ndị dị free.
NDỤMỌDỤ ASAA: Talk to Locals and Other Travelers
NDỤMỌDỤ 7 nke anyị Top 10 Easy Atụmatụ maka Train ịnya Smart, Gịnị bụ a mma isi mụta banyere otu obodo ma ọ bụ mba karịa site na-ekwu okwu ụfọdụ nke ya obodo, ma ọ bụ ndị njem ndị ọzọ bụ ndị nwere ike ịbụ na ebe ị na-aga? Ha ga-enwe ike ịgwa gị ins na outs nke gị ebe ma nye gị ndụmọdụ na ihe na-eme na ihe na-agaghị eme. Gbalịa n'imebi ice site na-arịọ a ajụjụ, àjà a ụtọ ma ọ bụ na-egosi ihe si n'obodo gị.
NDỤMỌDỤ asatọ: Mkpọ a Nri
Ejegharị ejegharị bụ agụụ na-agụ na-arụ ọrụ na ike ị chọrọ abịa ihe nri na mgbe ị na-na ụgbọ okporo ígwè. I nwere ike ngwaahịa elu na ọkacha mmasị gị ihe oriri na a obodo na ụlọ ahịa ma ọ bụ deli ma ọ bụ gaa na wine okpuru ulo tupu ị na hop na ụgbọ okporo ígwè; kasị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè nwere dịkarịa ala otu n'ime ndị a. The nri awa na ụgbọ oloko bụ mgbe bland na ndị ọzọ dị oké ọnụ ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ maka a mbụ na klas oche.
NDỤMỌDỤ Nsọpụrụ IHE ODIDE NTụKWASị: Mara Ebe Iji Nweta Off
Mara nke ebe bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa Easy Atụmatụ maka Train njem. Mgbe ị na-abata na a obodo gị nwere ike ịkwụsị na ọtụtụ suburban ụgbọ na ihe ịrịba ama na-egosi gị ebe aha na aha nke obi, ma adịghị hop anya ruo mgbe i ruo Central ojii. Ị nwere ike ịrịọ ya mgbe ọ nọ n'ụgbọ ma ọ bụ chọpụta gị akwụkwọ ntuziaka maka ihe enyemaka ọzọ.
NDỤMỌDỤ IRI: Always Cheta Obodo Train oru
Ịrịba ama otú ndị ọzọ njem gị n'ụgbọ okporo ígwè na-eme. Ọ bụrụ na ha na-jụụ, ijide n'aka na-eso. Lezienụ ihe ịrịba ama nke ahụ nwere ike na-egosi na ị na-nọ ọdụ na a họpụtara jụụ ụgbọ ala ebe ndị mmadụ na-ehi ụra ma ọ bụ na-arụ ọrụ. N'agbanyeghị ebe ị nọ, gbalịa ka ị ghara ịbụ loudest onye na gburugburu. Ike n'aka bụghị iji zuru ike ụkwụ gị na oche gafee si gị onwe gị kwa, belụsọ na ịnwere akpụkpọ ụkwụ gị anya.
Ọ bụrụ na ị na-echeta ndị a Top 10 Easy Atụmatụ maka Train ịnya Smart anyị ekwe nkwa na ị a super njem na onye na mkpokọta akwa ahụmahụ. Ị pụrụ ọbụna izute ụfọdụ ọhụrụ obodo na-eme ka ụfọdụ ndị enyi ọhụrụ! Ihe ọ bụla bụ na o kwere omume mgbe ọ na-abịa ọzụzụ njem. Ozugbo ị mụtachara ndị a, mgbe tụlee Bernina Express na ndị ọzọ!
– Ọ bụrụ na ị mmasị anyị post on Top 10 Easy Atụmatụ maka Train ịnya Smart, na-eche free ịkọrọ ya, anyị nwetara mkpọchi maka na-ekere òkè dị n'okpuru a blog post.
Njikere iji a ụgbọ okporo ígwè? AKWỤKWỌ oche gị na adịghị akwụ ụgwọ ọ bụla ntinye akwụkwọ ụgwọ na – www.saveatrain.com
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-10-easy-tips-for-train-riding-smart%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Atụmatụ traintip Train Travel